Wararkii ugu dambeeyay abaarta ka jirta dalka oo si degdeg ah uga sii dareysa | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wararkii ugu dambeeyay abaarta ka jirta dalka oo si degdeg ah uga sii dareysa
Wararkii ugu dambeeyay abaarta ka jirta dalka oo si degdeg ah uga sii dareysa
Waxaa ka sii dareysa xaaladda bani’aadanimo ee ka dhalatay abaaraha baahsan ee ka jira qaybo ka mid ah dalka, oo qoysas fara-badan ku khasbay inay guryahooda ka barakacaan.
Magaalada Kismaayo iyo duleedyadeedaba waxaa maalmihii la soo dhaafay gaaray dadkii ugu badnaa ee abuuruhu saameeyeen, ka dib markii haraad iyo gaajo ay uga soo barakaceen deegaanadoodii, xoolahoodiina ay ka la’deen.
Dadkan ay abaaruhu saameeyeen ee soo gaaray Kismaayo iyo nawaaxigeedaba ayaa isaga kala yimid deegaanada Gobolka Jubbada Hoose qaarkood, sida Dhasheek-waamo, Janaay Cabdalle iyo Sin-galeyr.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya in abaarta ka jirta deegaanada ka baxsan Magaalada Kismaayo ay mareyso heer xoolihii ay haysteen xoolo dhaqatada ay intooda badan ka fara maran yihiin.
Wariye-yaasha ayaa sidoo kale soo sheegaya in xoolo dhaqato badan oo xoolahoodii ka la’deen ay soo gaareen Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ee Kismaayo, iyagoo barakac ah.
Ku dhawaad boqol kun oo qof ayaa ku barakacay abaarta haatan ka jirta Gobolada Koonfureed, iyagoo baadi-goobaya biyo iyo cunto, ka dib markii ay abaartaasi saameysay in ka badan laba milyan oo qof, sida ay Jimcihii sheegtay Qaramada Midoobey, abaartana ay tahay mid si degdeg ah uga sii dareysa.
Kuxigeenka Ergayga Gaarka ee Xoghayaha Guud Qaramada Midoobey ee Somaliya ahna Isku-duwaha Xafiiska Gargaarka Bani’aadanimada, Adam Abdelmoula ayaa sheegay in sanadka inagu soo wajahan ee 2022 ay ku dhawaad sideed milyan oo qof ay cunto yari soo food saari doonto.
Maxamed Xuseen Rooble, Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ayaa Khamiistii ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkaba ugu baaqay in ay gurmad degdeg ah ka gaystaan abaaraha ku sii baahaya dalka.
Rooble oo ka hadlayay Shirka Golaha Wasiirada ee Galmudug ayaa yiri “Waxaan rabaa inaan halkan codsi uga jeediyo ummadda Soomaaliyeed in loo baahan yahay gurmad degdeg ah oo ku aaddan, sidii looga qayb qaadan lahaa samafalka dhibaatooyinka ay wataan abaaraha billaha soo socda inagu soo aaddan.”
“Waxaan rabaa inaan halkan uga soo jeediyo Beesha Caalamka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay jooggaan, gude iyo dibadba inay u soo gurmadaan dadkoodii iyo dalkoodii, kana badbaadiyaan abaartaa dhibka badan wadata ee nagu soo fool leh. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa gacantiisaa na deeqdo, inuu ummaddiisa il naxariis ah ku eeggo.”
“Waxaan mar kale ku soo celinayaa waxaa loo baahan yahay gurmad degdeg ah, sidii looga hortaggi lahaa abaarahaan, loogana hortaggi lahaa inay dad badani ka barakacaan goobahoodii, iyagoo raadinaya biyo iyo baadba.”
Somaliya ayaa waxaa abaaraha u sii dheer dagaalka soddonka sano ka socda, fatahaado iyo koran-korada ayaxa ee mararka qaarkood cagta marinaya dalagyada beeraha.
Wararkii ugu dambeeyay abaarta ka jirta dalka oo si degdeg ah uga sii dareysa was last modified: November 21st, 2021 by Admin
Canada oo ugu baaqday muwaadiniinteeda inay si deg-deg ah uga baxaan Itoobiya
Raysal wasaaraha Soomaaliya oo guddi qaran u magacaabauy ka jawaabida abaaraha ka jira dalka
Madaxweynaha Dowlad gobaleedka Jubbaland oo la kulmay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya
Akhriso:-Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Kulan Qado Ah La Qaatay Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas Nuur
Abiy Ahmed “Doorkayaga waa inaanu galnaa furinta hore ee dagaalka”
Madaxweyne Lafta Gareen oo gaaray Muqdisho
Boqolaal qof oo dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray tuubo ka qarxaday dalka India